Global Voices teny Malagasy » Aostralia: manangana ny governemantan’ny vitsy an’isa i Julia Gillard · Global Voices teny Malagasy » Print
Aostralia: manangana ny governemantan'ny vitsy an'isa i Julia Gillard
Voadika ny 16 Septambra 2010 13:06 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rennie Nandika Candy
Sokajy: Oseania, Aostralia, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Ny Praiminisitra Julia Gillard. Sary avy amin'ny Flickr an'i Troy, ampiasaina eo ambany fiarovana CC Attribution 2.0 Generic
Tapitra ny lalao fiandrasana fifidianana any Aostralia. Nanangana governemantan'ny mpiasa vitsy an'isa i Julia Gillard:
Niverina haingana tao amin'ny toerany amin'ny maha-Praiminisitra azy i Julia Gillard rehefa nanambara ireo solombavambahoaka tsy miankina, Tony Windsor sy Rob Oakeshott fa hanohana ny Mpiasa izy ireo hanagana governemantan'ny vitsy an'isa.
Mpiasa eo am-perin'asa : Manome ny fahefàna ho an'i Gillard i Windsor sy Oakeshott 
Ny Praiminisitra dia anam-boninahitra mampiadihevitra: tsy ampy ila havia, tsy mbola nanambady, tsy manan-janaka, ny sakaiza koa torak'izany, tsy mpino. Graham Young, mpandrindra ny Online Opinion  dia nizara voka-pikarohana sasany momba ny akon'ny fivavahana ao amin'ny vohikalany fitsapan-kevitra WHAT THE PEOPLE WANT [inona no ilain'ny vahoaka]:
Ny fikarohana nataon'i John Black dia manamafy fa ny Mpiasa dia namoy ireo Kristiana mpifidy azy tamin'ny fifidianana farany teo, nefa nihatsara teo ny teo amin'ireo tsy mpino sy “agnostics”. Nefa maherihery kokoa ireo Kristiana noho izy ireo mpifidy matanjaka. Toa mpifidy Green ny ankamaroan'ireo tsy mpino.
Kristiana sy tsy mpino – fandalinana ny taorian'ny fifidianana 
Nahazo laza manerana ny firenena ny Grog’s Gamut amin'ny maha-mpitoraka blaogy mahay momba ny politika nandritra ny fampielezan-kevitra, indrindra noho ny fomba fitsikerany ireo tatitra ataon'ny haino aman-jery. Nampifantoka ny sainy amin'ny ho avy izy izao:
Dia inona izao ny an'i ALP?
Ny soso-kevitro – aza saro-kenatra. Eny “malemy” io nefa ny hadisoan-dry zareo lehibe indrindra dia ny tsy nanaovany na inona na inona noho ny tahotry ny hatezeran'ny olona.
Ny lesona voalohany indrindra an'ny governemanta Rudd dia ny hoe mila fanapahan-kevitra ampiharina ny vahoaka. Aza matahotra na tsy malaza aza io, ny tokony eritreretina dia ny hoe fanapahan-kevitra tsara ve io sa tsia. Ka raha fanapahan-kevitra tsara io dia tohano ny heviny – mbà mpisolo vava ho azy, fa tsy mpivarotra.
Fifidianana 2010: Tapitra ny lalao (na, “Fibre to the Lodge”) 
John Styles, mpandrindra ny Australian Conservative sy mpandray anjara amin'ny The Spectator Australia dia mahita ireo zava-misy amin'ny fomba fijery hafa dia hafa mihitsy:
Amin'ny fanohanana ny fiarahan'ireo Mpiasa Green Havia, ireo antsoina hoe Mahaleo tena dia miseho ho manesoeso ireo lalàm-panorenany mpiaroaro…
Sady manisy ireo mahaleo tena izy, izay mpikambana taloha tao amin'ny Antokom-pirenena Mpiaroaro, nefa atokany manokana ho an'ilay mpahaleo tena Rob Oakeshoot ny ozony mahery indrindra:
Teto i Oakeshott niaiky fa nanome fanohanana lehibe ho an'ny antoko tsy ninoany akory izy. Nosoritany ho ‘tsy mahazatra’ izany fanapahan-keviny izany. Ahoana raha hafahafa, ratsy, hadalàna? Ary raha antsoina fotsiny izany hoe havendranana?
Tsy tokony manao izay hahafinaritra ireo mpifidy ve ireo mpilatsaka hofidiana? 
Jane dia manoratra ao amin'ny Fietezana * Fitandroana, blaogy “momba ny fiaraha-monina ela velona, ny fifindràna miala any amin'ny fifampihinanana ka mankany amin'ny fiainana feno filaminana ary ny fahafantarana ny fanahin'ny tena”. Mahatsapa fahafaha-manao vaovao izy, izay mety ho entin'ny governemanta amin'ny rafitra parlemantera lany andro:
Ny tena mahaliana amin'izao rehetra izao dia na eo aza ny fampielezan-kevitra tena manorisory, mbola manorisory lavitra ny tatira ataon'ny haino aman-jery ary ny rafitra voatokana hamokisana ny fahalianan'ireo antoko roa lehibe izay manao asa goavana alohan'ny fiaraha-monina, nanao izay hampandrenesana ny feony ireo mpifidy any Aostralia.
Ny lahatsoratra tiako indrindra dia avy amin'i Cristy, vehivavy bevohoka 38 herinandro, mpiaro ny zon'ny vehivavy sy politika mampalahelo avy any Canberra, renivohitr'i Aostralia. Hitako ny Ao an-jaridaina…. any ho any azy:
Izao, mazava ho azy, manana governemanta vaovao isika (ary soa ihany fa governemantan'ny vitsy an'isa tarihan'i Gillard io – manana fahatsapàna feno fanantenana aho fa ho tiako lavitra izay rehefa hitondra governemanta toa izay izy nanao fampielezan-kevitra) ary fotoana handrosoana amin'ny fiainana izao. Nefa satria aho efa bevohoka 38 herinandro izao dia tsy moramora izany. Ny fiainana nandritra ireo herinandrom-bohoka farany teo dia toa ambany governemantan'ny vitsy an'isa miovaova – tena tsy azonao an-tsaina mihitsy izay hipoitra ny ampitso. Mbola ratsy noho izany aza, mifanohitra amin'ny tranga nolalovantsika amin'ny maha-firenena antsika, tsy misy na iray aza liana marina amin'ny faminavinàna tsy an-kiato izay mety hitranga amin'ny oviana ary miha-vitsy aza ireo vaovao marina azo hamotorana izany faminavinàna izany.
‘Chief Blogger’ ao amin'ny Right Pulse dia mijery izany olan'ny mahaleo tena izany amin'ny fomba mpiady. Izany no “ Famadihana Goavana”. Manoro ny politika mifanohitra izy tahaka ny mahazatra avy amin'ireo antoko mpanohitra:
Afaka eritreretina ireo olana maro hanimbàna ny fahamarinan'ny governemanta. fampandoavan-ketran'ny saribao, sandan'ny herin'aratra, fidinan'ny fidiram-bola, hetran'ny fitrandrahana, sns… avy eo ampio sasany amin'ireo fepetran'ny Green tena mazana indrindra dia hahazo tanin'ady ahafahana maharesy ny governemanta ianao.
Ny fofon'ny rà – ny an'i Gillard – Mbola tsy tapitra II FANAMPIM-BAOVAO 
Tsy irery ny “Right Pulse” amin'ireo fihetseham-po ireo. Ny Australian Tea Party vaovao dia mampiasa kisarisary vetaveta amin'ny fanafihany, amin'ny filazàna fa “ny fahefàn'ny vahoaka” dia nanakana ny mahaleo tena Oakeshott amin'ny fakàna seza ao amin'ny governemanta ho Minisitry ny Raharaham-paritra:
Tsy misy làlan-droa ho an'izao, raha tsy naharay mailaka variraraka miaraka amin'ny valin-teny masiaka maherin'ny 5000 amin'ny fangalàrana sy sy ny vinavinany fa hahazo ministera avy amin'ny Mpiasa izy hanombohany ny fivarotan-tenany, mety nanambara teny izy ankehitriny fa Minisitry ny Raharaham-paritra vaovao.
Ilay mpifidy mpamadika Oakeshott dia nampihato ny hetahetam-keriny… noho ny HERIN'NY VAHOAKA 
The Possum ao amin'ny Pollytics dia fanta-daza ho “psephologist” noho ireo fandalinany ara-statistika ireo fitsapan-kevi-bahoaka sy fifidianana. Na dia afaka mampiasa solon'anarana aza izy dia tsy afeniny ny politika mivoatrany ao amin'ity fizahàna ny làlana ity:
Miaraka amin'ireo maro nampiasa vola tamin'ny fionganan'ny governemantan'ny Mpiasa… ny tsy fahazoana fandresena amin'ny elanelana ara-politika, ka mamela toerana saro-pady ahitàna ny ankamaroany “délicat” indrindra ary lasa miankin-doha amina “cross-benchers” iray tanana misolo tena ara-ideolojia ireo mpifidy tsy mifanara-kevitra, ka miteraka vokatra tsy hohajaina.
Possum dia maminavina fotoan-tsarotra ho avy ho an'ireo antokp mpanohitra sy ny haino aman-jery mpiaroaro:
Ny ho hitan'ny masontsika mandritra ny 18 volana manaraka na mihoatra dia “Unhinging” – “hystériques” diso tafahoatra izay hihoatra lavitra ny fihatsarambelatsihy, ny faharatsiam-panahy – ny “arsehattery” tsy lazaina intsony – izay nanolo ny adihevi-bahoaka momba ireo olan'ny governemanta nandritra ny 12 volana farany teo.
Aleo hanomboka ny “Unhinging” lehibe 
Ka mifarana sady mitohy ny lalao! tsy mbola saro-pantarina toa ity ny politika Aostraliana hatramin'ny governemantan'ny Mpiasa notarihan'i Gough Whitlam tany amin'ny taona 1970 tany.
Araka ny soratako, voalaza fa ho Ministry ny Raharaham-bahiny ao amin'ny governemantan'i Gillard ny Praiminisitra teo aloha Kevin Rudd.
(Filazàna manokana: mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa Aostraliana efa hatramin'ny 1972 aho.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/16/9014/
 Mpiasa eo am-perin'asa: http://www.theage.com.au/federal-election/labor-over-the-line-windsor-and-oakeshott-hand-power-to-gillard-20100907-14you.html
 Kristiana sy tsy mpino – fandalinana ny taorian'ny fifidianana: http://whatthepeoplewant.net/polls-in-the-news/september-2010/christians-and-atheists-post-election-analysis.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+whatthepeoplewant+%28What+The+People+Want%29
 Fifidianana 2010: Tapitra ny lalao (na, “Fibre to the Lodge”): http://grogsgamut.blogspot.com/2010/09/election-2010-game-over-or-fibre-to.html
 Tsy tokony manao izay hahafinaritra ireo mpifidy ve ireo mpilatsaka hofidiana?: http://australianconservative.com/2010/09/aren%E2%80%99t-elected-representatives-supposed-to-serve-the-voters/
 Ny fofon'ny rà – ny an'i Gillard – Mbola tsy tapitra II FANAMPIM-BAOVAO: http://www.rightpulse.com/archives/2463
 Ilay mpifidy mpamadika Oakeshott dia nampihato ny hetahetam-keriny… noho ny HERIN'NY VAHOAKA: http://australianteaparty.blogspot.com/2010/09/unfaithful-elector-oakeshott-has-lust.html
 Aleo hanomboka ny “Unhinging” lehibe: http://blogs.crikey.com.au/pollytics/2010/09/08/let-the-great-unhinging-begin/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CrikeyBlogs%2Fpollytics+%28Pollytics%29